म्यानचेस्टर सिटीलाई कारबाही किन? के होला क्लबको भविष्य?
नेपाल लाइभ सोमबार, फागुन १२, २०७६, १६:५५
काठमाडौं- इंग्लिस फुटबलमा यो सिजनकै सबैभन्दा ठूलो खबर हो- म्यानचेस्टर सिटीमाथिको प्रतिबन्ध। आखिर किन म्यानचेस्टर सिटीमाथि यति कडा कारबाही भयो त?
जारी सिजनको च्याम्पियन्स लिगमा बिहीबार राति म्यानचेस्टर सिटीले रियल मड्रिडविरुद्ध अन्तिम १६ को पहिलो खेल खेल्दैछ। तर च्याम्पियन्स लिगमा म्यानचेस्टर सिटीको उपस्थिति जितमा पनि खल्लो बन्ने भएको छ। किनभने जारी सिजन च्याम्पियन्स लिग उपाधि नै जिते पनि म्यानचेस्टर सिटी आउँदो दुई वर्ष च्याम्पियन्स लिगमा हुने छैन।
म्यानचेस्टर सिटीलाई युरोपियन फुटबलको प्रशासकीय निकाय युइएफएले दुई वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको छ। सिटीले युइएफएको ‘क्लब लाइसेन्सिङ एण्ड फाइनान्सियल फेयर प्ले रेगुलेसन’ उल्लंघन गरेको बताइएको छ। जसले गर्दा सिटीलाई ३० मिलियन युरो जरिवाना तिराउने निर्णयसमेत भएको थियो।
युइएफको ‘क्लब फाइनान्सियल कन्ट्रोल बडि’ को अनुसन्धानले म्यानचेस्टर सिटीले २०१२ देखि २०१६ सम्म स्पोन्सरमार्फत भएको आर्जन यकिन नदेखाएर छली गरेको बताइएको छ।
क्लबमा वित्तिय अनुशासनको नियमअनुसार क्लबको आम्दानी र खर्चको अनुपात मिल्नुपर्ने हुन्छ। कुन कुन शीर्षकमा कति आम्दानी भयो भन्ने यकिन खुलाएर त्यसको आधारमा मात्रै खर्च गर्न पाउने अवस्थामा पनि म्यानचेस्टर सिटीको आम्दानी लुकेको बताइएको छ। बिशेष त खेलाडीको तलब र खेलाडी किनबेचमा खर्च हुने रकमको अनुपात क्लबको आम्दानी अनुसार धेरैथोरै हुने गर्दछ।
सिटीमाथिको दुई वर्षको युरोपियन प्रतिस्पर्धामा प्रतिबन्धपछि २०२१ सम्मको सम्झौतामा क्लबमा रहेका प्रशिक्षक पेप गार्डिओला र च्याम्पियन्स लिगमा स्टार देखिने खेलाडीहरुले के गर्छन् भन्ने प्रश्न आइरहेका छन्। दुई वर्षको प्रतिबन्धमाथि थप अपिल गर्ने सिटीको तयारी भए पनि अहिलेसम्मको घटनाको विकास हेर्दा २०२२ सम्मका लागि सिटीमाथिको प्रतिबन्ध यकिन छ।
क्लबमा २०२१ सम्मको सम्झौतामा क्लबमा रहेका प्रशिक्षक गार्डिओलाले के गर्छन् भन्ने प्रश्न बढिरहँदा उनले परिस्थिति जस्तो आए पनि क्लब नछाड्ने विषयमा साथीहरुसँग कुराकानी गरेको बताइएको छ। तर म्यानचेस्टर सिटीले प्रतिबन्धमाथि गर्ने अपिलको निर्णयले उनको भविष्य क्लबसँग कसरी जोडिन्छ भन्ने प्रष्ट पार्नेछ।
म्यानचेस्टर सिटीका मिडफिल्डर डेभिड सिल्भा यही सिजनको अन्त्यमा क्लब छाड्दै छन्। तर सिटी च्याम्पियन्स लिगमा फर्कने समयसम्म सम्झौता रहेका अरु खेलाडीले के गर्छन् भन्ने पनि अन्योल नै छ। प्रिमियर लिगका लागि मात्र उनीहरु क्लबमा जोडिएर रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने प्रश्न जटिल छ।
खेलाडीले के गर्लान् भन्ने प्रश्नको केन्द्रमा स्ट्राइकर सर्जियो अग्युरो देखिन्छन्। उनको सम्झौता पनि २०२१ मा नै सकिँदैछ। उनीसँगै लेरोए सानेको सम्झौता पनि सकिन्छ। २०२२ मा जोन स्टोन्स र निकोलस ओटामेन्डीको सम्झौता सकिन्छ।
२०२२ भन्दा पछिसम्मको सम्झौतामा रहेका स्टार खेलाडीहरु केभिन डि ब्रायन, एडरसन, बर्नान्डो सिल्भा, रहिम स्टर्लिङ र रियाद महरेजबारे क्लबलाई सबैभन्दा समस्या पर्ने देखिन्छ। यदि प्रशिक्षक गार्डिओलाले छाड्ने हो भने धेरै खेलाडीहरु पनि क्लबमा बसिरहने छैनन्।
यदि च्याम्पियन्स लिगमा सहभागी हुन नपाउने हो भने म्यानचेस्टर सिटीको आम्दानी पनि झण्डै १ सय मिलियन पाउण्डदेखि १ सय ५० मिलियन पाउण्डसम्म घट्ने अनुमान भइरहेका छन्। आम्दानीमा त्यसरी कमि आउँदा क्लबले धेरै महङ्गा खेलाडी राखिराख्न पनि चुनौती नै हुनेछ।
अहिले म्यानचेस्टर सिटी लगातार नवौँ च्याम्पियन्स लिग खेल्दैछ। प्रिमियर लिग क्लबका लागि च्याम्पियन्स लिगको स्थान कुनै पनि वर्ष सुरक्षित देखिँदैन तर यदि दुई वर्ष च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिर रहने हो भने म्यानचेस्टर सिटीलाई अहिलेको लयमा फर्कन पनि समस्या हुनेछ।
लगातार दुई पटक च्याम्पियन्स लिग फाइनल खेलेर एक पटक विजयी भएको लिभरपुल २०१७ मा च्याम्पियन्स लिगमा नै थिएन। त्यसअघिको सिजन प्रिमियर लिगमा लिभरपुल आठौँ स्थानमा थियो। यसले पनि देखिन्छ, अवस्थाहरु कति छिटो परिवर्तन भइदिन्छ।
फुटबलमा समय एउटै रहँदैन नै। आउने जाने प्रक्रिया चलिरहन्छ। उस्तै शीर्षमा रहने र तल झर्ने प्रक्रिया पनि एकै हुँदैन। तर अहिलेको म्यानचेस्टर सिटीबाट गार्डिओला बाहिरिन्छन् भने सिटीले आफ्नो फुटबल यही ढंगमा बढाउने एउटा समय भने गुमाउने छ।
कारबाही हुने गरी सिटीले गरेको के हो त?
वास्तवमा म्यानचेस्टर सिटी कारबाहीमा पर्नुको कारण हो लुकाइएको आर्थिक गतिविधि। व्यक्तिगत रुपमा भएका भुक्तानी र प्रायोजन सम्झौतामा भएका भुक्तानीहरु पनि स्पष्ट नभएको युरोपियन फुटबलको प्रशासकीय निकाय युइएफको अनुसन्धानले देखाएको थियो।
म्यानचेस्टर सिटीको कारोबारको सम्बन्धमा ‘फुटबल लिक्स’ ले विभिन्न कागजपत्रहरु सार्वजनिक गरेको थियो। विशेषतः जर्मन पत्रिका ‘डेर स्पाइगेल’ मा उक्त विषय पहिलोपटक आएको थियो।
यसैले म्यानचेस्टर सिटीले आफूहरुविरुद्ध गलत नियतले केही समूह लागिपरेको र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउन गैरकानूनी रुपमा ह्याक गरेर कागजपत्रको गलत प्रयोग गरेको जनाइरहेको छ। सिटीले बाहिर आएका इमेलहरु पनि कारोबारमा आधारित इमेलहरु नभएको जनाएको छ।
युभेन्टसलाई सुपर कपको उपाधि